Imfihlo yaseVictoria yathengiswa kwiQiqithi yabucala ye- $ 1.1 yezigidigidi
WNgokungathandabuzekiyo, iMfihlo yaseVictoria, umyili waseMelika, umenzi kunye nomthengisi wee-lingerie zamabhinqa, iimpahla zomfazi kunye neemveliso zobuhle yayiyeyona nto yayithengisa impahla enkulu eUnited States. Uhlobo, olwasekwa ngo-1977 ngu Roy kwaye UGaye Raymond kuthengisiwe ngoku Leslie Wexner, umnini ngoku ulungiselela ukuhla.
Isidumo sakhe njengosomashishini wasembonweni savuswa bubuhlobo bakhe bexesha elide kunye nomntu ogwetyiweyo ngokwesondo UJeffrey Epstein. Ngo-2019, emva kokubanjwa kuka-Epstein, ingqalelo yajika yajonga kwakhona kwi-Wexners. U-Epstein wayengumphathi wemali ka-Wexner kwaye ubudlelwane babo babusondele kangangokuba uLeslie Wexner wamnika amandla egqwetha kwaye wamenza umphathi we-Wexner Foundation. I-Wexners inyanzelise ukuba basike ubudlelwane kunye no-Epstein ngonyaka ka-2007 emva kwezityholo zokuqala zokuba wayerhweba ngokuxhaphaza abantu ababhinqileyo.
Emva kweepesenti ezingama-40 zokuphoswa kwisitokhwe ngonyaka omnye, Imfihlelo yaseVictoria ibhengezwe ngonyaka ka-2019 ukuba izakuvala iivenkile ezingama-53 e-United States kwaye oku kukhokelele kwimbali ethi inkampani iza kuthengiswa kungekudala.
Inkampani engumnini weL Brands ithengiswa kwinkampani yabucala yabanini-mashishini kwisivumelwano esiyi- $ 525 yezigidi. I-Sycamore Partner kunye ne-L Brand ziyahlulahlula kulawulo lwe-brand. Inkampani yabucala ethenga izinto zabucala ithenge isibambiso esingama-55%, ngelixa iL Brands ithatha ulawulo lwe-45% eseleyo, kodwa iMfihlo yaseVictoria iyothunyelwa kwinkampani yabucala ngokupheleleyo. Esi sivumelwano sabhengezwa ngoLwesine, nge-20 kaFebruwari, ziinkampani zombini.
Kuyatshiwo ukuba u-Leslie Wexner, u-Billiire oneminyaka engama-82 ubudala obaleka ii-L Brands kumashumi ambalwa eminyaka, ushiya isikhundla sakhe njenge-CEO kunye nosihlalo njengenxalenye yentengiselwano. Uza kuhlala kwibhodi ye-L Brands njengosihlalo ovelayo.
Kwipapasho yeendaba, u-Wexner wathi ukwahlula imfihlo ye-Victoria kwinkampani yabucala "Inikezela ngeyona ndlela yokubuyisela la mashishini kwinqanaba lawo lembali lengeniso kunye nokukhula." Uye wancuma uSycamore ngayo "Amava anzulu" Kwishishini lokuthengisa kwaye uthe uyakuzisa Imbono entsha kunye nokugxila kwishishini. Sikholelwa ukuba, njengenkampani yabucala, iMfihlo yaseVictoria iya kuba nakho ukugxila kwiziphumo zexesha elide. Siyavuya ukuba, ngokugcina isibambiso esibalulekileyo sobunini, abaninizabelo bethu baya kuba nakho ukuthatha inxaxheba ngokubonakalayo kumandla aphezulu eziimpawu zentengiso," U-Wexner watsho ekukhululweni.
USekela-Mongameli kaMoody UChristina Boni, kwinqaku kubanini zimali, uthe, "Ukwahlula-hlula kuya kwenza ukuba ii-L Brands zinciphise amatyala kwaye zigxile kushishino olomeleleyo lweBath & Work Works, elimela ngaphezulu kwe-80% yengeniso yayo yokusebenza. Intengiselwano edityaniswe nemali ezinkozo iya kukhokelela ekucutheni amatyala aqikelelwa kwi-1 bhiliyoni kwaye kuncitshiswe umngcipheko onxulumene nokutshintsha kweshishini likaVictoria. ”
Njengoko iMfihlo kaVictoria sele ithengisiwe, sinethemba lokuba uza kubabona bebuyela kwindlela ebaleka imiboniso bhanyabhanya wabo wonyaka wefashoni njengoko oku kucinyiwe ngoNovemba ka-2019.
Ityala lemifanekiso: Instagram | I-Victoriassecret, iTyala: CNN.com
Wexner Leslie Wexner Imfihlo yeVictoria Imfihlo kaVictoria iyathengiswa
Ezona zinto zintle zixabisekileyo